South Beach Oceanfront Suite - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGailen
30-INTSUKU EZIFUMANEKAYO ZOKUQESHA
Indawo egqibeleleyo kuye nabani na okhetha ihotele ye-boutique azive enezixhobo ezigcweleyo ezibandakanya indawo yokuzivocavoca kunye nephuli emangalisayo. Ifakwe kufutshane ngqo neRitz Carlton South Beach kwiLincoln Road kunye noLwandlekazi lweAtlantiki; kwiSithili seArt Deco akukho ndawo ingcono.
Indawo yokupaka: Indawo enikezelweyo yevalethi inikezelwa kuphela ukuba isetyenziswe kuphela ($30/ixabiso losuku) Iindwendwe ezindwendwele umqeshi obhalisiweyo kufuneka zihlawulele indawo yokupaka.
Sidale umgangatho ogqibeleleyo we-10th kuye nabani na okhetha ukuziva kwehotele ye-boutique nazo zonke izibonelelo zendlu exhotyisiweyo. Ikhitshi ihlaziywe nazo zonke izixhobo ezitsha kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-dishwasher, i-microwave, i-oveni yetoaster, iprosesa yokutya, umenzi wekofu njl.njl kunye nazo zonke izitya kunye nezinto zokupheka.
Qaphela: Ubuninzi beeNdwendwe EZIMBINI zivumelekile ukuba zigcine le yunithi.
Iindwendwe: Bonke abatyeleli kufuneka babhalise ukungena kwisakhiwo ukuze batyelele iindwendwe ezibhukishelwe kwigumbi.
Umabonwakude weCable kwigumbi lokuhlala, iCable TV kwigumbi lokulala, iprinta engenazingcingo yeHP, i-wifi yabucala yasimahla
Iyunithi inebhedi ye-ottoman yokutsala. I-sofa ayifanele isetyenziswe njengebhedi.
Ifakwe kufutshane ngqo neRitz Carlton South Beach kwiLincoln Road; akukho ndawo ingcono. Indawo yokupaka i-valet yasimahla igcina i-30 yeedola ngosuku kwimirhumo yokupaka eSouth Beach.
Ukuzola okukhulu kunye nendawo eninzi--- nje ukuba upake ungahamba phantse naphi na apho ufuna ukuya khona kwindlela iLincoln okanye iboardwalk kanye ngaphandle. Umda wolwandle
Indawo yokuzivocavoca kwizakhiwo (iidola ezingama-60 zihlawulwa kwisakhiwo - kungenjalo ezinye iindawo zokuzilolonga ezikufutshane), indawo entle yokuphumla, izitulo ezithotyiweyo zaselwandle kunye neambrela elunxwemeni.
Akukho ndawo ingcono eSouth Beach! Imi kulwandle kufuphi ngqo ne-Ritz Carlton, i-Decoplage ikwi-South Beach yeyona ndawo ilungileyo yokuthenga kunye nokutya; Indlela iLincoln.
Ngaphambi kokufika, kuyimfuneko ukuba zonke iindwendwe zizalise isicelo se-intanethi esifunwa sisakhiwo ngeenjongo zokhuseleko.
Emva kokuvunywa kwangaphambili kogcino lwakho, nceda u tyelele (iwebhusayithi efihliweyo) kwaye usebenzise ikhowudi ye-6056 kunye nesaziso seeyure ze-72 okanye ikhowudi ye-6060 yenkonzo ye-RUSH. Iyunithi yi #1038
Iziko lokuzilolonga (i-60 yeedola yokupasa ekhoyo) , indawo yokubhukuda emangalisayo esandula kufumana ukulungiswa kwe-2 yezigidi zeedola kwiminyaka emibini edlulileyo. Ulwandle lufikeleleka ngokuthe ngqo kwisakhiwo kunye nezaphulelo zinikezelwa kwisitulo solwandle / irenti ye-umbrella kubahlali baseDecoplage.
Ndiza kudibana neendwendwe amaxesha amaninzi ukubonelela ngezitshixo kwaye ndihlala eCoconut Grove ekumgama nje wemizuzu eli-15 ukuba zifuna uncedo.
Akukho ndawo ingcono eSouth Beach! Imi kulwandle kufutshane neRitz Carlton, iDecoplage ikwiSouth Beach yeyona ndawo ilungileyo yokuthenga kunye nokutya; Indlela iLincoln.
Le yunithi inendawo yokupaka i-valet iquka --- ISIKHALA # XXX
Yazisa nje ivalethi ukuba ufuna imoto yakho ipakishwe esithubeni #XXX kwaye ubonelele ngenombolo yendawo xa ufuna imoto yakho iziswe.
Ngaphambi kokufika, kuyimfuneko ukuba lonke undwendwe lugqibezele isazisi se-intanethi esifunwa sisakhiwo ngeenjongo zokhuseleko. Oku kusingathwa yinkampani yangaphandle ukuqinisekisa ukuba iinkcukacha zakho zigcinwa ngasese. Nje ukuba ugcino lwakho luqinisekisiwe ndiza kukuthumelela isivumelwano sokuqeshisa kunye nemvume yomnini-ndawo enokuthi ingeniswe nguwe kwi-intanethi
Umbuki zindwendwe ngu- Gailen
Inombolo yomthetho: BTR007126082019, 2213611